Shiinaha Shaashad jilicsan oo jilicsan Ribbon LED Module Soo-saare iyo Soo-saare | Yonwaytech
Bandhig Faneed jilicsan jilicsan oo jilicsan oo Module ah
P1.56mm Super Module LED jilicsan oo jilicsan oo leh 200mmx150mm Xajmiga Wareegga LED.
P1.875mm, P2mm, P2.5mm, P3mm, P4mm Super Flexible Soft Module Module oo leh 240mmx120mm ama 256mmx128mm Cabbirka Gudbinta LED Bedbedelka.
P2.5mm sidoo kale waxay leedahay Module Super Flexible Soft LED oo leh 320mmx160mm.
Guddi dabacsan oo kaladuwan oo hagaagsan ayaa kufiican mashruuc loogu talagalay baahida macaamiisha.
Jilicsan PCB iyo daboolka salka ayaa ka dhigaya guddiga LED dabacsan jilicsan, sidaas darteed qaab kasta waxaa lagu gaari karaa iyada oo ku saleysan baahiyahaaga.
Guddi rogrogmi kara, waxay la jaan qaadi karaan baahiyo hal abuur oo kala duwan, ka dhig naqshadaada hal-abuurka fursado badan.
Xakamaynta tayada adag iyo waayo-aragnimada muddada-dheer ee codsiga ayaa lagu hubiyay waxqabadka iyo waxqabadka aadka u wanaagsan iyadoo la adeegsanayo
Chips Nationstar LED iyo icn2153 Wixii Midab Ugu Fiican Midabaynta 3840HZ Heerka Refresh.
Display LED Dislexible Display wuxuu awood u leeyahay inuu rogrogo si uu ula jaanqaado conx, concave ama sagxado qalloocan oo furaya awood aan dhammaad lahayn oo loogu talagalay rakibidda gaar ah
Muujinta LED-hayalka san waa dherer ahaan 13.5mm oo keliya.
Muuqaalka LED-ka ee rogrogmi kara ayaa kaliya 0.35 kg Kasta oo module ah oo badbaadinaya shaqada iyo gaadiidka.
Awood bixinta ayaa la dhigi karaa Max. 20m ka fog jirka shaashadda LED-ka oo ka ilaali shaashadda LED kuleylka hoose iyo cimriga dheer.
Display LED Dislexible waxaa loogu talagalay kulan maskaxeed aad u fudud maskaxda iyo dayactirka hore, kaas oo lagu dhejin karo looxyada birta iyada oo loo marayo magnets-yada muhiimka ah ee qayb kasta.
Nidaamka rakibo debecsan
Muuqaal Wareegsan oo Iskudhufnaan ah oo Muuqaal ah ayaa lagu rakibi karaa muuqaalka muuqaalka muuqaalka ama sawirka si loo waafajiyo baahiyahaaga muuqaalka muuqaalka ah ee loo yaqaan 'LED'. Waxaa loogu talagalay isku xirnaan aad u fudud maskaxda iyo dayactirka hore, kaas oo lagu dhejin karo looxyada birta iyada oo loo marayo magnets-ka muhiimka ah ee qayb kasta.
Si ballaadhan ayaa loogu isticmaalay dhismaha aan caadiga ahayn, sida naadiga, masraxa qaab-dhismeedka qaab dhismeedka, istuudiyaha, suuqa weyn, suuqa laga dukaameysto, garoonka, riwaayadda, baarkinka madaddaalada, aragtida aragtida, dhismaha, garoonka diyaaradaha iwm.
Halbeegga Farsamada: Y-IF-jilicsan Ribbon-V01
Cabbirka Module (mm)
Xalinta Module (Pixel)
Cufnaanta (Pixels / ㎡)
Habka Wadista (Waajibaadka)
Iftiin (nits / ㎡)
Radian qaloocsan ≤ 120 °, radian qalooca ag 120 °. La-talinta La-talin Raadiyaan ah -90 °.
Daawashada Xagasha (°)
Fasalka Gray (Qaybaha)
Ugu badnaan Isticmaalka Awoodda (w / ㎡)
Celceliska Awoodda Isticmaalka (w / ㎡)
Joogtada Frame (Hz)
Soo Celinta Joogtada (Hz)
Heerkulka Shaqada (ºC)
Xiga: Dhaqaalaha & Tamarta Keydinta IP65 Adeegga Hore ee Xayeysiinta Bannaanka Muuqaalka LED
Bannaanka hore Joogtee Shaashadda Muuqaalka Muuqaalka, Xayeysiinta ...
Bannaanka hore ee Shaashadda Furan, Tirada Xayeysiinta ...
Bannaanka Fidhka Daah ee Xayeysiinta hufan ...
Bannaanka HD Cidhiidh Pixel Pitch 2.5mm Display LED ...
Smartshelf LED Banner Display, Digital Price Tag ...
Tirinta Dabaqa Dabaqa LED Display / LED Interactive ...